मालदिभ्समा राजनीतिक संकट झन गहिरियो, प्रधानन्यायाधीश र पूर्व राष्ट्रपति गैयुम पक्राउ, सर्वोच्च अदालत प्रहरी घेरामा - मालदिभ्समा राजनीतिक संकट झन गहिरियो, प्रधानन्यायाधीश र पूर्व राष्ट्रपति गैयुम पक्राउ, सर्वोच्च अदालत प्रहरी घेरामा
मालदिभ्समा राजनीतिक संकट झन गहिरियो, प्रधानन्यायाधीश र पूर्व राष्ट्रपति गैयुम पक्राउ, सर्वोच्च अदालत प्रहरी घेरामा
नेपालबहस संवाददाता २०७४, २३ माघ 82 Views
२३ माघ, काठमाडौं । केही दिन यतादेखि व्यापक राजनीतिक विवाद सुरु भएको मालदिभ्समा मङ्गलबार त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ गरिएको समाचार छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई मङ्गलबार बिहानैदेखि प्रहरीले घेरा हालेको छ भने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अर्का एकजना न्यायाधीशलाई पनि पक्राउ गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
मङ्गलबार बिहानको यो नाटकीय परिवर्तनसँगै त्यहाँको राजनीतिक संकट झनै गहिरिएको समाचारमा जनाइएको छ । गएको बिहीबारदेखि सुरु भएको राजनीतिक संकटका कारण यहाँ थप तनाव भएको बताइएको छ ।
मङ्गलबार बिहान प्राप्त समाचारअनुसार मालदिभ्स्का प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह सइदलाई उनको निवासबाटै पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
आइतबार मालदिभ्स्को सरकारले यहाँको सेना र प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशनबमोजिम सोमबार दिउँसैदेखि त्यहाँको प्रहरी सक्रिय भएको थियो ।
मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले गएको बिहीबारको फैसलामा त्यहाँको जेलमा रहेका सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहागर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा मालदिभ्स्का पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिद र पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई रिहा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँको सरकार उनीहरुलाई रिहागर्ने पक्षमा नरहेकोले सरकार र अदालतबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सोमबारै मध्यराति राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले पूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमलाई पनि पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए ।
सोही आदेशबमोजिम नै पूर्व राष्ट्रपति गैयुमलाई मध्यरातमा उनको निवासबाट पक्राउ गरेर राजधानी माले पु¥याएको समाचारमा जनाइएको छ । उनी हाल प्रहरी हिरासतमा छन् ।
उनले मालदिभ्स्मा ३० वर्षसम्म राष्ट्रपतिको रुपमा शासन गरेका थिए । सन् २००८ मा भएको पहिलो राष्ट्रपतीय प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए ।
‘मैले पक्राउ गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन, तर सरकारले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ’, उनले आफ्ना समर्थकहरुलाई दिनुभएको भिडियो सन्देशमा भनेका छन् ।
पक्राउ पर्नुभएका पूर्व राष्ट्रपति गैयुम वर्तमान राष्ट्रपति यामिनका सौतेला दाजु हुन् । उनी मालदिभ्स्मा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने राष्ट्रपति हुन् ।
अदालतको आदेश नमानेको भनेर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमको आलोचना गर्दै आएको थियो । उसले राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई महाअभियोग लगाउन वा उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आदेश दिनसक्ने अनुमान पनि सोमबार गरिएको थियो ।
त्यसैले त्यस अगावै सरकारले सोमबारै अपरान्हतिर संकटकालको घोषणा गरेको थियो । संकटकाल लगाएपछि सरकारले सेना र प्रहरीलाई अदालतको कुनै आदेश नसुन्न र आफ्नो निर्देशनमा कामगर्न सबै सुरक्षा अंगलाई आदेश दिएको छ ।
उता पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदका कार्यकर्ताहरुले उनलाई रिहा गर्नुपर्ने मागगर्दै मालदिभ्स्को राजधानी मालेमा बिहीबारदेखि नै व्यापक मात्रामा प्रदर्शन गर्र्दै आएका छन् ।
कैयौँ स्थानमा प्रहरीसँगको भिडन्तका कारण राजधानी मालेको अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको बताइएको छ । दर्जनौँ व्यक्ति घाइते पनि भएका छन् । यहाँ बिहानैदेखि प्रदर्शनहरु हुने गरेका छन् ।
नसिद सन् २००८ मा भएकोे निर्वाचनमा मालदिभ्स्को राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो । तर उनलाई सन् २०१२ को फेब्रुअरी महिनामा प्रहरी ‘कू’ मार्फत हटाइएको थियो ।
मङ्गलबार बिहान प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्नु अगावै सर्वोच्च अदातलमा प्रहरीले घेरा हालेको थियो । अहिले पनि अदालत बाहिर प्रहरीको निकै बाक्लो उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।
संसदमा अझै पनि राष्ट्रपति यामिनलाई महाभियोग लगाउन मिल्नेगरी दुई तिहाई बहुमत विपक्षी दलहरुको रहेको छ । त्यसैले पनि राष्ट्रपतिले विपक्षी नेताहरुलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएको हुनसक्ने अनुमान सर्वत्र गरिएको छ ।
तर पनि यहाँका सुरक्षा अंगहरुलाई राष्ट्रपति यामिनलाई पक्राउ गर्ने या महाभियोग लगाउने कुनै प्रयासहरु भएमा त्यसमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न नै सरकारले आदेश दिएको छ ।
२०७४, २३ माघ
प्रा. डा. केसी तारेखमा रिहा, प्रधानन्यायाधीशलाई पर्यो नैतिक दवाव
सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए डा. केसी
प्रधानन्यायाधीशले गरे ९ः३० बजे इजलास शुरु गर्ने प्रस्ताव
प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुली संसदबाट सर्वसम्मत : शपथ आज